true study /zu-ZA/tools-for-life/study/steps/removing-the-first-block-to-learning.html read 6 8 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/study_zu_ZA.jpg UbuChwepheshe BokuTadisha
Ikhambi LeSithiyo Sesithathu Sokutadisha:
Igama elingaqondakali lizohlala lingaqondakali kuze kube yilapho uthola kahle incazelo yokushiwo yilelo gama.
Uthola incazelo yegama ngokubheka incazelo yalo kwisichazamazwi futhi uthole ukuqonda okugcwele kwalelo gama.
Uma usubheke zonke izincazelo zegama futhi uqonda igama ngokuphelele futhi usukwazi ukuthi ulisebenzisa kanjani, lelo gama lingabizwa ngeselichaziwe. Lokho kungenxa yokuthi ukuqonda incazelo kanye nokusetshenziswa kwalo kucacile kuwe futhi akukho lutho mayelana negama ongakuqondi.
Kukhona izinyathelo eziqondile okufanele zilandelwe ukuchaza noma yiliphi igama ongaliqondi ohlangabezana nalo ezifundweni zakho.
1. Yiba nesichazamazwi esihle eduze futhi sitholakale ngenkathi ufunda ukuze ubheke okushiwo yiliphi igama ongaliqondi ngokugcwele. Isichazamazwi esihle asinawo amagama alukhuni ezincazelweni. Isichazamazwi esihle senza ukwazi ukuchaza igama ngaphandle kokubheka amanye amagama amaningi futhi.
2. Lapho uthola igama noma uphawu ongaluqondi, lubheke uluthole kwisichazamazwi sakho. Uma kunezincazelo ezingaphezu kweyodwa ezifakiwe ohlwini, bheka ngokushesha izincazelo ngayinye ukuthola eyodwa evumelana kahle nokuchaza igama engqikithini elalisetshenziswe kuwo. Ingqikithi isho amagama noma izigaba ezimfishane zamagama eziza ngaphambi noma ngemuva kwegama elithile isiza ukuchaza incazelo yalo ngokuphelele. Isibonelo, ingqikithi yegama elithi “bat” ihlukile kule misho emibili futhi, njengoba ubona, umusho uyasiza ukuchaza ukuthi igama lisho ukuthini:
1. Wathatha i-bat washaya ibhola.
2. Wabona i-bat ilulwane lindizela esihlahleni.
Funda incazelo esebenza engqikithini efanele futhi uqiniseka ukuthi uyiqonda ngokuphelele. Isibonelo, isichazamazwi singabhala lokhu okulandelayo:
bat: 1. induku noma iklabhu elalisetshenziselwa
ukushaya ibhola kwezemidlalo. 2. isilwane
elinamaphiko futhi sindiza ebusuku.
Izichazamazwi zivame ukunikeza izibonelo zendlela igama lisetshenziswa ngayo emshweni. Kepha ukuchaza ngokuphelele igama, kufanele wakhe eyakho imisho usebenzisa lelo gama kuze kube yilapho a) uliqonda ngokugcwele, b) ukhululekile ukulisebenzisa futhi c) unokuqonda okucacile kwencazelo yalelo gama.
Lapho uliqonda ngokuphelele igama, akudingeki ulokhu ucabanga ngalo. Uyazi nje. Ungadinga ukwenza eyakho imisho eyishumi noma ngaphezulu ukuthola ukuqonda okugcwele kwalelo gama.
3. Isinyathelo esilandelayo ukuthola izincazelo ngayinye efakwe ukuchaza leligama. Funda incazelo bese uthola izincazelo zanoma yini encazelweni ebhaliwe ongayiqondi kahle. Sebenzisa leligama elinalencazelo emishweni eminingana uze uliqonde kahle. Ngemuva kwalokhu thatha incazelo elandelayo, uyifunde uyisebenzise emishweni.
Qhubeka kanje kuze kube yilapho usuthole zonke izincazelo ezifakwe ohlwini emishweni futhi uqonde ngokuphelele ngayinye incazelo. Uma igama linezincazelo eziningana ezingafani, awukwazi nje ukuthola incazelo eyodwa bese usho ukuthi uyaliqonda igama ngokuphelele. Kufanele ukwazi ukuliqonda igama lapho usulibona futhi nencazelo ehlukile. Ngakho-ke thola kahle zonke izincazelo ngayinye ezifakwe ohlwini.
4. Into elandelayo okufanele yenziwe ukuthola incazelo yomsuka wegama. Lokhu kusho ukuthi igama lavelaphi. Ukwazi ukuthi igama lavelaphi kuzokusiza uthole ukuqonda okuyikho kwalelo gama.
5. Isichazamazwi osisebenzisayo sinokufaka izaga encazelweni. I-saga sisho iqoqo lamagama lapho, uma esetshenziswa ndawonye, ​​anencazelo ehlukile kulokho igama elikushoyo nencazelo yawo ejwayelekile. Isibonelo, ukubamba iso lomuntu lesaga sisho “ukuthola ukunakwa umuntu othile.” Uma kukhona noma yiziphi izaga ezibhalwe kusichazamazwi segama olifunayo, zifunde futhi uzisebenzise emishweni uze uziqonde kahle.
6. Thola incazelo ephelele yanoma yiluphi olunye ulwazi mayelana negama elingase lifakwe ohlwini lwesichazamazwi, njengamanothi wokuthi lisetshenziswa kanjani (ukusetshenziswa kwalo) kanye namagama ahlukile kodwa enencazelo efanayo. Amagama ahlukile anencazelo efanayo. Isibonelo, “mncane” okanye “uzacile” amagama ahlukile anencazelo efanayo.
7. Uma ubona igama noma uphawu ongaluqondi kahle kunoma iyiphi enye yezincazelo, izaga noma amagama ahlukile ebe enencazelo efanayo, kufanele uthole incazelo ngaso leso sikhathi usebenzisa inqubo efanayo ebhalwe ngaphezulu. Bese ubuyela encazelweni obukade uphezu kwayo ekuqaleni.
Izincazelo zezimpawu ne-zifinyezo ezisetshenziswe kwisichazamazwi zivame ukufakwa ekuqaleni kwencwadi futhi ungazibheka lapho. Kodwa-ke, uma uzithola uchitha isikhathi esiningi ufunana nezincazelo zamagama noma ubheka okushiwo yizimpawu noma izifinyezo, kufanele uthole isichazamazwi esilula.
Nasi isibonelo sokusebenzisa lezinyathelo ezingenhla ukuchaza igama. Ake sithi ufunda umusho “Wayehlanza oshemula chimneys ukuziphilisa,” futhi awunaso isiqiniseko sokuthi kusho ukuthini ukuthi “chimneys.”
Uthola u-“chimney” esichazamazwini bese ubheka izincazelo bese uthola leyo efanele lengqikithi. Lencazelo ithi “i-flue yentuthu noma amagesi aphuma emlilweni.”
Awunasiqiniseko sokuthi “i-flue” isho ukuthini, ngakho-ke ubheka yona. Isichazamazwi sithi i-flue “yipayipi lapho intuthu noma ukushisa komlilo kungaphuma ngalo esakhiweni.” Lokhu kuyavumelana futhi kunengqondo, ngakho-ke usebenzisa lona emishweni ethile kuze kube yilapho usuliqondisisa kahle.
I-“Flue,” kulesi sichazamazwi inezinye izincazelo futhi umelwe ukuthola nezinye izincazelo futhi uzisebenzise zonke ngazinye emishweni.
Okulandelayo, funa umsuka wegama elithi “flue.”
Lapho usulichaze ngokuphelele igama elithi “flue,” buyela emuva ku-“chimney.” Lencazelo, “i-flue yentuthu noma amagesi aphuma emlilweni,” manje isiyaqondakala, ngakho usebenzisa igama elithi “chimney” emishweni uze uthole ukuyiqonda kahle.
Ube usuthola ezinye izincazelo. Ake sithi isichazamazwi sinencazelo engasasebenzi (yakudala futhi ayisasebenzi) nenye incazelo ebhalwe njengokuthi yi-geological (ephathelene nokufundwa kwamadwala nokumbiwa phansi). Uzozeqa zombili lezi, ngoba azisetshenziswa ngendlela ejwayelekile.
Manje qedela ukuchazwa komsuka wegama elithi “chimney.” Uthola emsukeni wegama ukuthi lavela egameni lesiGriki elithi “kaminos,” elisho ukuthi “isithando somlilo.”
Uma igama linamagama ahlukile ebe enezincazelo ezifanayo, amanothi wokulisebenzisa noma izaga, konke lokhu kudinga uthole izincazelo zakhona.
Lokhu kuzophothula ukuchazwa kwegama “chimney.”
Lena yindlela noma yiliphi igama okufanele lichazwe ngayo.
Ukuhlolwa kwangempela okwenziwa eqenjini labafundi kwatholakala ukuthi amagama avame kakhulu ukuvimba ukuqonda emagameni esiNgisi amagama alula, anjengokuthi “a,” “the,” “exist,” “such,” njll.
Ukuthola ukuqonda okugcwele kwala magama esiNgisi alula, futhi uthole ukuwaqonda kahle kwawo, kudinga isichazamazwi esikhulu. Izichazamazwi ezincane zibonakala sengathi zicabanga ukuthi “wonke umuntu uyazazi izincazelo zalamagama amancane”—kodwa abantu abaningi abazazi.
Cishe kuyamangaza ukubona ukuthi umuntu oseqede iminyaka yokufunda ezifundweni ezinzima kakhulu eyunivesithi, futhi waphothula iziqu eziphakeme, akazazi izincazelo zamagama esiNgisi anjengokuthi “or,” “by” noma “an.” Kunzima ukukukholwa lokhu, kepha kuvamile ukwenzeka. Kepha uma lomfundi ebheka futhi athole izincazelo zamagama angazange awaqonde kahle, iminyaka yakhe yonke yokufunda ingaguqulwa kusuka emibuzweni eminingi nokudideka kube ukuqiniseka nokuqonda konke kwalokho akufundile.
Yini igama elichaziwe?
Igama elichaziwe yilelo okuye kwachazwa kuze kube sezingeni lokuliqonda ngokuphelele ngokubheka isichazamazwi incazelo evamile yalelo gama, kanye nanoma iyiphi incazelo yezobuchwepheshe noma ekhethekile yalelo gama elixhumene nesihloko osifundayo.